Ahoana ny fampiatoana ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10 | la-manette.com
Eny, azonao atao ny mamono ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10, ary amin'ity torolàlana ity dia hasehontsika anao ny fomba telo hanatanterahana ity asa ity.
On Windows 10, ny Quality Updates (na ny Cumulative Updates) dia misintona ary apetraka ho azy raha vao misy izy ireo. Raha io fomba mandeha ho azy io dia ahafahan'ny fitaovana mahazo fanavaozana fiarovana mba hamahana ny fahalemena, hanatsara ny fampisehoana ary hanatsara tsy misy fifandraisana amin'ny mpampiasa, dia angamba iray amin'ireo endri-javatra mampiady hevitra kokoa.
Amin'ny ankapobeny, izany dia noho ny fanavaozana misy bibikely izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny traikefa amin'ny fomba maro samihafa. Ohatra, afaka manapaka ny fampiasa efa misy izy ireo, mampiditra olana amin'ny fampifanarahana ny mpamily sy ny fampiharana, ny efijery manga mahafaty (BSoD), ary mitaky reboot izy ireo mba hamitana ny fametrahana, izay mety hanelingelina ny fikorianan'ny rindrambaiko.
Raha toa ianao ka mahita olana bebe kokoa noho ny tombontsoa rehefa manavao, na raha manana antony marim-pototra hampiasa solosaina tsy voafehy ianao, miankina amin'ny edisionao Windows 10, dia azonao atao ny manaisotra ny fanavaozana mandeha ho azy avy hatrany. 'mampiasa ny app Settings na miaraka amin'ny politikan'ny vondrona na ny rejisitra.
Ao amin'ity Windows 10 mpitari-dalana, dia hitarika anao amin'ny dingana mba hisorohana ny Windows Update tsy misintona ho azy sy mametraka fanavaozana ao amin'ny solosainao.
Ahoana ny fomba hamonoana ny fanavaozana mandeha ho azy miaraka amin'ny fanovana
Raha te handingana fanavaozana manokana ianao dia tsy mila vonoinao mandrakizay ny Windows Update. Fa kosa, tokony hijanona ny fanavaozana ianao mandra-pahatongan'ny Talata Patch manaraka. Ny app Settings dia misy safidy hanajanonana ny fanavaozana rafitra mandritra ny 35 andro Windows 10 Home sy Pro.
Mba hamono vetivety ny fanavaozana mandeha ho azy, araho ireto dingana ireto:
Sokafy ny app Settings.
Tsindrio ny Update & Security.
Kitiho ny Windows Update.
Tsindrio ny bokotra Advanced Options.
5. Ao amin'ny fizarana "Pause for updates", ampiasao ny menio midina ary safidio ny halavan'ny fotoana hanesorana ny fanavaozana.
Rehefa vitanao ireo dingana ireo dia tsy hisintona intsony ny fanavaozana mandra-pahatongan'ny andro nofaritanao. Rehefa tonga eo amin'ny fetra fiatoana ny solosaina dia mila mametraka ny patch farany azo alaina ianao mba hahafahan'ilay safidy ho hita indray.
Azonao atao foana ny manafoana ny fanovana amin'ny fanarahana ny toromarika marina voalaza etsy ambony, fa amin'ny dingana n ° 5, safidio ny safidy Mifidiana daty. Azonao atao ihany koa ny hahatratra ny vokatra mitovy amin'ny fipihana ny bokotra Tohizo ny fanavaozana ao amin'ny pejy Windows Update.
Ahoana ny fomba hamonoana ny fanavaozana mandeha ho azy amin'ny Politikan'ny Vondrona
Ny Tonian-dahatsoratry ny Vondrona eo an-toerana hita ao amin'ny Windows 10 Pro dia misy ny politika hanafoanana ny fanavaozana mandeha ho azy na hanova ny fanovana Windows Update hanapa-kevitra hoe rahoviana no hapetraka eo amin'ny solosaina ny patch.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hack ny lalao Dinosaur amin'ny Google Chrome?
Atsaharo ny fanavaozana
Mba hamonoana hatrany ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10, araho ireto dingana ireto:
Sokafy ny Start.
Search gpedit.msc ary tsindrio ny vokatra voalohany hanombohana ny tonian-dahatsoratry ny vondrona eo an-toerana.
Mandehana mankany amin'ny lalana manaraka:
Fametrahana solosaina > Modely fitantanan-draharaha > Windows singa > Windows Update.
Tsindrio indroa amin'ny Ampifanaraho ireo fanavaozana mandeha ho azy eo amin'ny ilany ankavanana.
6. Zahao ny safidy sembana mba hanafoana tanteraka ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10.
7. Tsindrio ny bokotra mampihatra.
8. Tsindrio ny bokotra OK.
Rehefa vita ireo dingana ireo dia hijanona ho azy ny fampidinana fanavaozana. Na izany aza, ny fahafahana manamarina ny fanavaozana amin'ny tanana dia mbola ho hita ao Fikirana > Fanavaozana sy fiarovana > Fanavaozana Windows, ary kitiho ny bokotra Check for Updates mba hisintonana ny fanamboarana farany.
Raha te-hamerina ny fanavaozana mandeha ho azy amin'ny fitaovana ianao dia afaka mampiasa ny toromarika mitovy amin'ny etsy ambony, fa amin'nydingana n ° 5, aza hadino ny mifidy ny safidy Tsy voarindra.
Fepetra ny fanavaozana
Ny Tonian-dahatsoratry ny Vondrona eo an-toerana ihany koa dia mamela anao hamono ny fanavaozana mandeha ho azy.
Raha hitantana ny fampidinana mandeha ho azy Windows Update miaraka amin'ny Politika Vondrona, araho ireto dingana ireto:
Sokafy ny menu Start.
Mitadiava gpedit.msc ary safidio ny valiny voalohany hanombohana ny andrana.
Fandrindrana solosaina > Modely fitantanan-draharaha > Windows singa > Windows Update.
4. Tsindrio indroa ny politikan'ny Configure Automatic Updates eo amin'ny ilany havanana.
5. Jereo ny safidy Activate mba hampavitrika ny politika.
6. Ao amin'ny fizarana "Options", safidio ny safidy hisorohana ny downloading ary ny fametrahana automatique ny fanavaozana amin'ny Windows 10:
2. Ampahafantaro ny fampidinana sy fametrahana mandeha ho azy.
3. Misintona mandeha ho azy sy fampahafantarana ho an'ny fametrahana.
4. Misintona ho azy ary mandamina ny fametrahana.
5. Avelao ny mpitantana eo an-toerana hifidy ny toerana.
7. Auto download, mametraka fampahafantarana, restart fampahafantarana.
Torohevitra haingana: Ny safidy tsara indrindra hamonoana ny fanavaozana mandeha ho azy dia safidy 2 - Ampahafantaro ny fampidinana sy ny fametrahana mandeha ho azy, fa afaka manao safidy hafa ianao. Raha misafidy ny safidy laharana 2 ianao dia tsy ho alaina ho azy ny fanavaozana. Raha ny tokony ho izy, ao amin'ny pejin'ny fanovana Windows Update, dia hahita bokotra "Ampidiro izao" ianao izao hanosika fanavaozana.
7. Tsindrio ny bokotra Ampiharo.
Rehefa vitanao ireo dingana ireo, dia ho tapaka tanteraka ny fanavaozana mandeha ho azy Windows 10. Na izany aza, rehefa misy ny fanavaozana vaovao dia azonao atao ny mametraka azy ireo amin'ny tanana avy amin'ny pejin'ny fanovana Windows Update.
Vakio ihany koa: Filaharana amin'ny heists karama ambony indrindra ao amin'ny GTA 5 an-tserasera
Ahoana ny fomba hamonoana ny fanavaozana mandeha ho azy miaraka amin'ny rejisitra
Azonao atao koa ny mamono ny fanavaozana mandeha ho azy amin'ny fampiasana ny rejisitra amin'ny fomba roa farafahakeliny, toy ny rehefa mampiasa ny Tonian-dahatsoratry ny Vondrona eo an-toerana ianao.
fampitandremana: Ity dia fampahatsiahivana am-pirahalahiana fa mampidi-doza ny fanitsiana ny rejisitra ary mety hiteraka fahasimbana tsy azo ovaina amin'ny fametrahana anao raha tsy manao izany tsara ianao. Manoro hevitra anao hanao backup feno ny anao PC alohan'ny hanohizana.
Mba hamonoana Windows 10 fanavaozana izay manova tanteraka ny rejisitra, araho ireto dingana ireto:
Search regedit ary tsindrio ny valiny voalohany hanombohana registry editor.
HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SOFTWARE \_ Politika \_ Microsoft \_ Windows
4. Tsindrio havanana amin'ny fanalahidy Windows (folder), safidio ny submenu vaovao, dia fidio ny safidy Key.
5. Omeo anarana ny fanalahidy vaovao Windows Update and press hiditra.
6. Tsindrio havanana amin'ny fanalahidy vao noforonina, safidio ny submenu vaovao ary safidio ny safidy Key.
7. Lazao ny lakile vaovao AU ary tsindrio ny Enter.
8. Tsindrio havanana amin'ny lakile AU, safidio ny submenu Vaovao, ary safidio ny safidy sanda DWORD (32-bit).
9. Lazao ny fanalahidy vaovao NoAutoUpdate ary tsindrio ny Enter.
10. Tsindrio indroa ny fanalahidy vao noforonina ary ovay ny sandany 0 ho 1.
11. Tsindrio ny bokotra OK.
12. Atsaharo ny solosainao.
Aorian'ny fanatanterahana ireo dingana ireo, ny fanavaozana mandeha ho azy avy amin'ny Windows Update dia ho kilemaina tanteraka. Na izany aza, mbola afaka misintona fanavaozana ianao raha ilaina amin'ny fipihana ny bokotra Hamarino ny fanavaozana ao amin'ny Windows 10 pejy fanovana fanavaozana.
Raha te hanafoana ny fanovana ianao dia azonao atao ny manaraka ny toromarika mitovy amin'ny etsy ambony, fa amin'ny dingana # 4, tsindrio havanana amin'ny fanalahidin'ny Windows Update, safidio ny safidy Esory, ary atsangano indray ny solosaina mba hampiharana ny fanovana.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny rejisitra hanitsiana ny rafitra rafitra hanapa-kevitra hoe ahoana Windows 10 mandray fanavaozana.
Raha te hanova ny fanovana Windows Update hanakanana ny fanavaozana miaraka amin'ny rejisitra, araho ireto dingana ireto:
Mitadiava regedit ary tsindrio ny valiny voalohany hanokatra ny Registry Editor.
4. Tsindrio havanana amin'ny lakile Windows (folder), safidio ny submenu vaovao, ary safidio ny safidy Key.
5. Omeo anarana ny fanalahidy vaovao Windows Update and press teny .
Vakio ihany koa: Ahoana ny fahazoana Apple TV + maimaim-poana mandritra ny 4 volana?
9. Lazao ny fanalahidy vaovao AUOptions ary tsindrio ny Enter.
10. Tsindrio indroa eo amin'ny fanalahidy vao noforonina ary ovay ny sanda (isa fotsiny) ho:
2 - Ampahafantaro ny fampidinana sy ny fametrahana mandeha ho azy.
3 - Misintona mandeha ho azy sy fampahafantarana ny fametrahana.
4 - Fisintonana mandeha ho azy sy drafitra fametrahana.
5 - Avelao ny mpitantana eo an-toerana hisafidy ny masontsivana.
7 - Fisintonana mandeha ho azy, fampahafantarana fametrahana, fampandrenesana indray.
Ireo safidy ireo dia miasa sahala amin'ny firafitry ny politikan'ny vondrona, ary ny safidy laharana 2 no akaiky indrindra amin'ny famonoana ny Windows Update Windows 10 maharitra.
Rehefa vitanao ireo dingana ireo dia tsy ho alaina sy hapetraka ho azy intsony ny fanavaozana mitambatra. Na izany aza, rehefa misy fanavaozana vaovao dia hanana safidy hametraka azy io amin'ny alàlan'ny Windows Update Settings ianao.
Mbola afaka mampiasa toromarika mitovy ihany koa ianao hamerenana ny fikandrana tany am-boalohany, fa amin'ny dingana n ° 4, tsindrio havanana amin'ny fanalahidy Windows Update, mifidy safidy esory ary avereno indray ny fitaovana.
Na mampiasa Windows 10 na OS hafa ianao, dia ilaina ny fanavaozana amin'ny fanamboarana lavaka fiarovana, famahana olana, ary fanatsarana ny traikefa amin'ny ankapobeny. Na izany aza, indraindray dia misy fialan-tsiny tsara hanalana azy ireo. Ohatra, rehefa te-hifehy tanteraka ny fanavaozana ny rafitra ianao. Te hanamaivana ny mety hisian'ny olana ianao noho ny dikan-teny buggy. Na mampiasa fampiharana na fitaovana manakiana ianao, ary tsy te hiaina olana mifanaraka amin'izany.
Top 7 Game Consoles: Ny valiny
COVID-19: Ny teknolojia novolavolaina hanaraha-maso ny fiparitahan'ny coronavirus dia mety hampiasaina amin'ny fomba diso, hoy ny fampitandreman'ny mpikatroka momba ny fiainana manokana | Vaovao UK